Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Alexander Isak Oo Xiiso Ka Helaya Kooxaha Premier League, Amine Gouiri Oo Ku Biiri Kara Liverpool, Xaalka Lingard Iyo Qodobo Kale
HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Alexander Isak oo Xiiso ka helaya Kooxaha Premier League, Amine Gouiri oo ku biiri kara Liverpool, Xaalka Lingard iyo Qodobo kale
September 14, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
BD ayaa heli doonta dalab dhan 100m euros ama ka badan Borussia Dortmund si ay u fasaxdo 18-jirka qadka dhexe Jude Bellingham, iyadoo labada Manchester City iyo Liverpool la sheegay inay xiiseynayaan xiddiga reer England. (Bild)
Arsenal ayaa ka fikireysa inay iska iibiso goolhayaha 29-jirka ah ee reer Germany Bernd Leno xagaaga soo aadan. (Dailymail)
Baacsigii ay Manchester United ugu jirtay Leon Goretzka, oo 26 jir ahaa, ayay dhirbaaxo la kulantay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka oo ogolaaday qandaraas cusub oo uu Bayern Munich ku sii joogi doono ilaa 2026. (Kicker)
Real Madrid ayaa awoodi karta inay la soo wareegto weeraryahanka Paris St-Germain iyo France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah, oo lagu daray 21 jirka Borussia Dortmund ee weerarka uga ciyaara Norway Erling Braut Haaland, xagaaga soo socda sida uu yiri madaxweynaha La Liga Javier Tebas. (Cadena Cope)
Chelsea ayaa isku diyaarineysa inay qandaraas cusub u soo bandhigto 22 jirka qadka dhexe ee England Mason Mount, kaasoo mushaharkiisa lagu kordhin karo ilaa £ 150,000 toddobaadkii. (90min)
Daaficii hore ee Manchester United ee 21 jirada Axel Tuanzebe, oo 23 jir ah, ayaa doonaya inuu amaahda uu ku joogo Aston Villa ka dhigo mid joogto ah. (Thesun)
Bayern Munich ayaa ka shaqeyneysa saxiixa weeraryahanka Germany Timo Werner, oo 25 sano jir ah, kana tirsan Chelsea bishii Janaayo. (Footballinsider247)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Faransiiska Paul Pogba, oo 28 jir ah, kaasoo si weyn loola xiriirinayay Paris St-Germain iyo Real Madrid, ayaa u janjeera inuu sii dheereysto joogitaankiisa Manchester United ka dib markii uu Cristiano Ronaldo ku soo laabtay Old Trafford. (TheAthletic)
Leicester City ayaa sare u qaaday xiisaha ay u qabto Manchester United xidigeeda 28-sano jir ah ciyaaryahanka qadka dhexe Jesse Lingard. (Fichajes)
Chelsea ayaa u dhaqaaqi karta laba daafac oo Inter Milan ah, iyadoo 22 jirka reer Talyaani Alessandro Bastoni iyo daafaca dhexe ee Slovakia Milan Skriniar lala xiriirinayo kooxda Champions League-ga Yurub. (Sportsmediaset)
Tottenham ayaa miiska u saartay dalabka qadka dhexe ee AC Milan Franck Kessie, oo 24 jir ah, inkasta oo aysan caddayn in Spurs ay u dhaqaaqi doonto bisha Janaayo ama ay sugi doonto inay xagaaga dambe si xor ah kula soo wareegto xiddiga reer Ivory Coast. (Calciomercato)
Rajada Spurs, si kastaba ha ahaatee, waxaa ku dhacday dharbaaxo iyadoo kooxda reer Talyaani ay ku kalsoon tahay in Kessie uu sii joogi doono San Siro wixii ka dambeeya xilli ciyaareedkan. (Football. London)
Liverpool ayaa xiiso u muujisay weeraryahanka Nice Amine Gouiri, iyadoo tababare Jurgen Klopp uu aad u doonayo saxiixa 21 jirka reer France. (Fichajes)
Arsenal ayaa ka mid ah tiro ka mid ah kooxaha Premier League oo bartilmaameed u ah weeraryahanka reer Sweden Alexander Isak, oo 21 jir ah, inkasta oo ciyaaryahanka Real Sociedad uu dhowaan ogolaaday heshiis cusub oo shan sano ah oo uu la sii joogo kooxda reer Spain. (Fichajes)
Manchester United ayaa wax ka weydiisay xiddiga garabka uga ciyaara Barcelona iyo Spain Ansu Fati, oo 18 jir ah, iyadoo u mareysa wakiilka Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. (Mundo Deportivo)
Tottenham ayaa dooneysa inay iska iibiso xiddiga qadka dhexe ee England Harry Winks xagaagan laakiin waa haddii kooxaha ay bixiyaan 40 milyan ginni 25 jirkaan. (Thetimes)